JINGHPAW KASA: MUNGGU MAKAU KAW GAP MYEN (4) SI
ရှမ်းပြည်အခြေစိုက် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၄) လက်အောက် တပ်ရင်း (၃၈) မှကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များသည် မုံဂူ ဘက်မှဆင်းလာသော ဗမာအစိုးရစစ်တပ်ကို ဇွန် (၅) ရက်နေ့တွင် ဖြတ်တိုက်ခဲ့ရာမှ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဤစစ်ပွဲတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ (၄) ဦးသေဆုံးပြီး၊ (၅) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Aradi law!! myu tsaw share shagan niegrai kabu shakawn aw law ga ai law chyeju dum nga ga ai law .matut nna myen 100 hpe mung anyawp kau lu mu ga akyu hpyi ya nga ga ai law dung 38 kaw na myu tsaw share shagan nieKarai Kasang gaw nan hte hpe galoi mung bau sin nga u ga law .nan hteapala gaw gap dat shagu tsadan myen chyaje hpe shamyit kau lu u ga akyu hpyi majai nga let sumtsan pang lai kaw na myu tsaw shadang ngai.
GOD, chyeju sha shakawn nga mu. Myen TSADAN hpe gap shamyit ai hte, YESU HRISTU HTE YEHOWA GOD, a- hpung shingkang hpe Mungkan de sakse madun na re...........,